Basola abamakhaza kuphambana izidumbu - Ilanga News
Home Izindaba Basola abamakhaza kuphambana izidumbu
Basola abamakhaza kuphambana izidumbu
UQHINQE amahora kungekho zisebenzi ebezingawusiza umndeni wakwaMkhize, obuyobheka isidumbu sawo kwa-Avbob, eMpangeni esingcwatshwe ngomunye umndeni ngoLwesine olwedlule.
KUPHOQELEKE ukuba simbiwe izolo ngeSonto isidumbu sowesifazane waseNcekwana, eMpangeni, esingcwatshwe ngephutha ngomunye umndeni emuva kokuba kuphambane izidumbu. kusolwa ubudedengu bezisebenzi zakwa-Avbob, eMpangeni lapho lezi zidumbu bezigcinwe khona.
Uyaveva umndeni kaNkz Sindisiwe Mkhize (42) othi namanje kawukholwa ukuthi i-Avbob ingenza ubudedengu obunje, kuthi indodakazi yawo ingakahlali nosuku oluphelele emakhazeni, wona usuthola ucingo lokuthi isidumbu sayo sesingcwatshwe ngomunye umndeni ngephutha.
UNkz Mkhize kuthiwa ushone mhla ka-31 kuZibandlela (December) 2020, wathathwa “ngephutha” ngomunye umndeni wamngcwaba ngawo umhla ka-31.
Ilungu lomndeni elicele ukungadalulwa lithe umufi wangena esibhedlela iGarden Clinic, eMpangeni, bathola ucingo ezintathakusa zangomhla ka-31 luthi useshonile.
“Sicela ukungakhulumi ngokuthi ubephethwe yini, kodwa bekungewona lo mkhuhlane okhona ezweni. Sabatshela esibhedlela ukuthi sisebenzisa amakhaza akwa-Avbob, yibo abazofika bezolanda isidumbu. Saluthola impela ucingo oluvela kwabakwa-Avbob besho ukuthi isidumbu sesikubona,” kusho leli lungu lomndeni.
Lithi baqala amalungiselelo ngawo umhla ka-31, baya nasemahhovisi akwa-Avbob, bagcwalisa konke okwakudingeka. Bahamba bayokwenza nesitifiketi sokufa.
“Sathuka soma sesithola ucingo ntambama kuthiwa indodakazi yethu isingcwatshwe ngomunye umndeni. Siyaqonda ukuthi isikhathi esikusona sinzima, kodwa lokhu sikubona kube nobudedengu obuyisimanga ngoba noma sesiya kuyona inkampani yabangcwabi, satshelwa ukuthi iphutha kalenziwanga yiyo.
“Kwathiwa lenziwe yilona omunye umndeni owathatha isidumbu esingafanele. Umbuzo uthi umndeni ufike wazithathela isidumbu nje, noma wanikwa sona kwathiwa ngesawo,” kusho leli lungu lomndeni wakwaMkhize.
Lithi yibo abebelokhu belandela ukuthi izinto zigcine zenzeke ngendlela, i-Avbob izithele ngabandayo.
“Kuze kube yimanje, kasikaze silithole ngisho igama elithi iyaxolisa ngalesi sigameko,” kusho leli lungu lomndeni. ILANGA lifike kanye nawo lo mndeni ngabo-8 ekuseni emahhovisi akwa-Avbob eMpangeni lapho ubuyokhomba khona isidumbu ukuthi yiso ngempela yini lesi ebesesimbiwe, kodwa kuze kwaba yisemini ungazi ukuthi kwenzekani.
“Bathathe abebeyokhomba isidumbu babagqokisa izimpahla zakhona babafaka ngaphakathi qede bacisha ugesi, bavala bazihambela sasala sibukana. Size safonela umphathi wabo esifundazweni, uMnu Makhosonke Mncube, oze wafika wazobheka ukuthi kwenzekani,” kusho yena.
ILANGA lizibonele futhi sekutheleka abanye abaphathi abanqabile ukukhuluma nalo bathi malikhulume noMnu Mncube ngoba nguye ogunyazwe ukukhuluma ezingeni lesifundazwe.
Naye ulichithile wathi akanayo imvume yokukhuluma kepha kumele lixhumane nabasenhlokohhovisi yale nkampani.
UMnu Adriaan Bester okhulumela i-Avbob uthe njengenkampani bayazwelana kakhulu nemindeni yomibili ngalesi sigameko.
“Yize sithembela kakhulu emindenini ukuthi ikhombe amalungu ayo, kodwa siyaqonda ukuthi yithi okumele siqikelele uma imindeni ilanda izidumbu, futhi siqinisekise ukuthi ithola ezayo ngempela.
“Njengamanje siyaxoxa nemindeni futhi siyaphenya ukuthi senzeke kanjani lesi sigameko ukuze zigwemeke nangelinye ilanga,” kusho uMnu Bester esitatimendeni.
Okhulumela amaphoyisa Kwa-Zulu-Natal, uColonel Thembeka Mbhele, uthe okwamanje imindeni yomibili kayikangcwabi ngoba nalona omunye owangcwaba isidumbu okungesona ubufuna simbiwe bese uyangcwaba ngaleso sikhathi kwatholakala ukuthi imithetho kayikuvumeli lokho.
Previous articleUkhalela ubisi oluchithekile oweBucs
Next articleUsizi kowoKhozi FM eshonelwa ababili